သင့်အနာဂတ်သည် သင့်လက်ထဲတွင် ရှိသည်… – သတင်းထူး – Thadin Htoo
သင့်အနာဂတ်သည် သင့်လက်ထဲတွင် ရှိသည်…
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၀ ကျော်တွေ့ဆုံပြီး နိုင်ငံရေး ရာတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရပ်တွေကို ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရပ်ဖက်-စစ်ဖက် ဆက်ဆံရေး အတွင်းက ပါဝါချိန်ခွင်လျှာကို ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာ ပြသခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ လူကိုကြည့်ရနိုးနိုး၊ ပါတီကို ကြည့်ရနိုးနိုး ဖြစ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက် ပိုလို့တောင် သင်ယူနိုင်မယ့် ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပံ့ပိုးပါ့မယ်လို့ မကြာခဏထုတ်ပြောလေ့ရှိတဲ့ တပ်မတော်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မျက်နှာမူတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် အပြောအဆို၊ အလုပ်အကိုင်တွေကို ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါမှ ပြောစကားနဲ့ လုပ်ရပ် တစ်ထပ်တည်းကျမယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။ တပ်မတော်ပြောပြောနေတဲ့ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီလို့ ဆိုစေဦးတော့ လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်တစ်ခုဟာ ရွေးကောက်ခံ အရပ်သားအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကို နာခံရတယ်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ (မြန်မာ့အဆက်အစပ်နဲ့မို့ “တတ်နိုင်သမျှ” ဆိုတာကို ထည့်ရတာ။ မဟုတ်ရင် ထည့်စရာတောင် မလိုပါ။)
ကင်းရှင်းရမယ်၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ လားလားမျှ ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်း မရှိရဘူးဆိုတာတွေဟာ ဘယ်မြေ ဘယ်ရေ မှာဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီရဲ့ အင်မတန်မှ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေပါပဲ။ ဒီလိုသဘောတွေ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းက သာ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၀ ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မျက်နှာ မူသလား၊ မမူသလား ဆိုတာကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများက ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ။ သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းတဲ့ အထဲမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလို စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့ ပါတီမျိုးအပါအဝင် မကြာသေးမီကမှ ဖွဲ့ထားတဲ့ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (PPP) လိုမျိုးလည်း ပါဝင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အထဲက အချက် ၃ ချက်ဟာဆိုရင် သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေအနေနဲ့ရော တပ်မတော်အနေနဲ့ပါ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရတွေနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေတယ် ဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင် သိမှသိပါလေစ။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီခေါ်ပေးဖို့၊ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ နဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြောင်းလဲပေးဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မမျှတရင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ စတဲ့ အပြောအဆိုတွေဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျောခိုင်းနေရုံမက တပ်မတော်အစိုးရကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တောင် ကိုက်ညီမနေပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါ့မယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ကိုယ်၌က ခြေဥနဲ့ မညီတဲ့ အပြောအဆိုတွေကို ပြောဆိုတာ၊ လုပ်ကိုင်တာတွေဟာ ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ ကာလုံခေါ်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတာတွေဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အာဏာပါ။ အကယ်၍ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ အဖွဲ့ဝင်များဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အရည်အချင်းပျက်ယွင်းတယ်လို့ ယူဆခဲ့ရင် သူတို့ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ အတိအလင်းဖော်ပြပြီးသားပါ။ ဒီလို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ ကျော်လွန်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆီကို သွားပြောတယ်ဆိုတာဟာ ဘယ်လိုသဘောပါလဲ? လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို တပ်မတော်အပါအဝင် သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ပါတီတွေက မလေးစားတာလား? တပ်မတော်အစိုးရကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့အစည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့တောင် မကိုက်ညီမှတော့ ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဝေးစွ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပါဝါချိန်ခွင်လျှာဟာ ဘယ်လိုသဘောရှိနေသလဲဆိုတာ ပါတီကို ကြည့်ရနိုးနိုး၊ လူကိုကြည့်ရနိုးနိုး ဖြစ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ သဘောပေါက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှာသာ ရှိရမယ့် တပ်မတော်ဟာ ကိုယ်နဲ့လားလားမျှမသက်ဆိုင်တဲ့ နယ်ပယ်ထဲကို ကျော်လွန်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာ၊ သွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယ်၌က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ကျော်လွန်ပြီး ပြောဆိုခဲ့တာ၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သာဖြစ်တဲ့ တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို ကျောင်းသားက ဆရာမကို သွားတိုင်သလို သွားတိုင်ကြတာ စတဲ့ အပြောအဆို၊ အလုပ်အကိုင်တွေကို ကြည့်ရင်ပဲ ဒီလို ပါဝါ အခင်းအကျင်းမျိုး၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ (သွားတွေ့တဲ့ပါတီတွေ) ကိုယ်တိုင်က တပ်မတော်ကို ခစားနေရတဲ့ အခင်းအကျင်းမျိုးမှာ ဘယ်လောက်ပဲ လူကို ကြည့်ပြီးမဲပေးလိုက်ပါစေ၊ ကိုယ်မဲပေးလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာ မိုးပျံအောင် တော်နေ၊ တတ်နေပါစေ ဘယ်လိုမှ အပြောင်းအလဲတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်သလို၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုလည်း ဘယ်လိုမှ အာမခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအခင်းအကျင်းမှာ၊ ဒီလိုမျိုး ပါဝါတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လို့ ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့လက်ထဲ ပြန်ရောက်အောင် ကြိုးစားနေရတဲ့ ကာလမှာ ပြည်သူကို မျက်နှာမူပြီး ပြည်သူ့ အပေါ် ဘယ်တုန်းကမှ သစ္စာမပျက်ခဲ့တဲ့ ပါတီနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့ ပို၍သေချာစေခဲ့ပါပြီ။
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် လေအိတ် အမြန်ရထားကို ၂၂ ရက်တွင် စတင်ပြီး ပြေးဆွဲတော့မည်…